I-China Kids Skisuit mveliso kunye nabenzi | Senlai
Ukungena kwabantwana kwiiStroller
Ingxowa yokulala yabantwana
Ukunxiba kwabantwana ngaphandle
I-PU yabantwana enemvula
Ingubo ye-Ski ilungele imisebenzi yangaphandle yabantwana, ukuthengiswa kumazwe aseYurophu, kuye kwathandwa kakhulu ngabathengi, kwilaphu lihambelana neemfuno zokukhuselwa kwendalo yaseYurophu.
Isinxibo se-1 kufanelekile kwimisebenzi yangaphandle yabantwana, ukuthengiswa kumazwe aseYurophu, kuye kwathandwa kakhulu ngabathengi, kwilaphu eli lihambelana neemfuno zokukhuselwa kwendalo yaseYurophu.
2.we sinefektri yethu, iqela loyilo lobugcisa elinabasebenzi abanezakhono, sithatha nzulu zonke iinkcukacha, ngeendlela ezininzi zokuhlangabezana neemfuno zeendwendwe.
3.we sikhethe ukusebenzisa i-100% yefayibha ye-polyester, izinto zizaliswe kwikotoni, i-210 t, i-cap e-detachable cap, i-MAO emlonyeni we-pocket kunye namagxa enqaku elibonakalisayo, i-zipper engenawo amanzi kunye neefowuni zetsimbi, zineempawu zazo zokuyila kwi-clasp.
I-cuff kunye neenyawo zinoyilo olukhethekileyo lokungenwa ngumoya, unyawo luneenyawo ezinyawayo. Ukucoca imiyalelo: susa imitya yoboya eyenziweyo ngaphambi kokuhlamba, ungasebenzisi iblitshi okanye ilaphu elithambileyo, unokusebenzisa ibhokisi yokomisa kunye nokomisa (ukuya kuthi ga kwi-40 ℃) Yikhuphele emoyeni ngokukhawuleza emva kokuhlamba, ukuze ungangcolisi, i-iron kubushushu obuphantsi, ayicoceki ukucoca.Akupheleli ekubukekeni okuhle kuphela kodwa ikwanakho okungangeni manzi, ukungangeni umoya kunye nefuthe elifudumeleyo.
Ukusuka kwilaphu ukuya ekusebenzeni, sinabasebenzi abazinikeleyo ukulawula ngokungqongqo umgangatho.Sinethemba lokuba nentsebenziswano yexesha elide kwaye siphumelele. Wamkelekile ukuthenga iimveliso zethu.
Egqithileyo I-PU yabantwana enemvula
Ifeksi: 0086-311 85983948
Phantsi kwemeko yobhubhane, inkampani ...
Jonga ngakumbi +